musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Hupenyu Hutsva hweBluefields Westmoreland Jamaica
Guestpost • Jamaica Kupwanya Nhau
kutanga kwaMbudzi 2021, chirongwa cheBluefields Best Kept Street Competition, chinova chepfungwa chaKeith R. Wedderburn weBluefields Organic Farm, vachapemberera nekucherechedza kushanda nesimba uye hunyanzvi hwakaiswa nevagari vazhinji mukuita kuti nharaunda dzavanogara ive nzvimbo yakanaka. live.
Mibairo yakanangana nekukurudzira kudada kwevagari munzvimbo dzavanogara, kukurudzira maitiro ane hushamwari kwezvakatipoteredza, kuwedzera kuziva kwezvakatipoteredza, uye kupa mubayiro vanhu vanochengeta migwagwa yavo.
Vagari vanozopinda munzira kana munhu mumwe nemumwe, ipapo vatongi vanozopihwa basa rekutsvaga mugwagwa wakanyatsokodzera:
1. Mubayiro Unonyanya Kuyevedza 2. Inonyanya Kuyevedza Yebindu Remberi Mubairo 3. Mubayiro Wekuita Zvakanakisisa Kudzokorodza 4. Mubayiro Wakanakisisa Wemugwagwa WeAnti-Litter uye 5. Vechidiki muMubayiro weBest Kept Street.
Guta reBluefields rakavambwa muna 1519. Annotto Bay neSevilla La Nueva kana New Seville maguta maviri akatangira Bluefields. Henry Morgan the Buccaneer, Captain Blight (akaunza breadfruit uye ackee kuchitsuwa), uye Henry Gosse, munyori ane mukurumbira pamusoro peshiri dzeWest Indian, vose vakagara muBluefields. Paivewo neminda yakati wandei yakatenderedza zvakasara zveminda yeBluefields neShafton zvichiripo nanhasi. Kusvika pari zvino nhengo dzemunharaunda dziri kufara zvikuru nechirongwa chiri kurongwa. Dare Rinotungamirira rakaumbwa kuti ritungamirire chirongwa chinotungamirwa naKeith Wedderburn uye vakatowana rutsigiro rwerutsigiro nezvisungo kubva kunhengo dzemhuri yeBluefields dzinogara mhiri kwemakungwa.
Kana makwikwi atanga, vari kutarisira shanduko yakakwana. Pamusoro pekucheneswa, kushongedza nekuchengetedza nzvimbo, zvinotarisirwa zvinobuda zvakawanda. Semuyenzaniso, Marara achatarisirwa nenzira yakafanira kuenda kumberi, hapafanirwe kuve nekupiswa kwemarara kana kuraswa zvisiri pamutemo. Vatori vechikamu vachakurudzirwa kuti vatore chikamu mumisangano ine chekuita nekurasa marara nekuita manyowa izvo zvinozoita kuti vadzidze kupatsanura marara avo uye kutanga kushandisa organic material kugadzira manyowa. Uyewo, marara anounganidzwa haazosiyiwi. Kuti utarise marara zviri nani, zviremera zvinofanirwa kuunganidza zvinhu zvinorasa zvakaita sepurasitiki, mabhodhoro egirazi, mafaira ealuminium nezvimwe nguva nenguva mumugwagwa wega wega. 2 Dzimwe mhinduro kusvika pari zvino ndeidzi: "Pfungwa yakanaka yatinotsigira seimwe yeNyikastyle Villages seBhizinesi mapurojekiti uye ichakupa rutsigiro neruzivo futi" - Diana McIntyre Pike, Community Tourism Developer Consultant "Ndinotambira zano iri nekuti richaita vanhu munharaunda vane pfungwa yekudada nekwavanogara, nekurudziro yekuenda nayo. Ndinokupa chitsidzo changu, ndichakutsigira." - Ralva Ellison, nhengo yenharaunda yeBelmont, iye zvino anogara kunze kwenyika. "Zvinonzwika zvakanaka uye chirongwa chakanaka kwazvo." Vanodaro Sergeant Berry vepaBluefields Police Station.
“Mazano Akachenjera. Ndiri muchikepe kuti ndipe pese pazvinenge zvichidiwa,” anodaro Robblin Wedderburn, aimbova mugari weBelmont uye pamudyandigere Mutevedzeri Mukuru weMapurisa uyo parizvino anogara kuUS “Chakanakisa chirongwa. Zvivakire kune vechidiki kuitira kusimudzira kwenguva refu. " Anodaro Wolde Kristos, Community Developer uye mugari weBelmont “Pfungwa yakanaka. Ndinotenda kuti chimwe chinhu chakadai chichabatsira nharaunda. " - Nickeisha Robinson, mugari weBelmont “Zvakanakai… Kana zvichibvira, tumirai chikumbiro kukero yangu yeemail. Ini zvirokwazvo ndichawana kutenga kubva kuWestmoreland Municipal Corporation ”-
Michael Jackson "Ndingafara kubatana newe. Tiri kupa husiku hwemahara kuti tiwane mubairo. - Linda Cheddister (Luna Seas Hotel) "Inonzwika sechirongwa chakanaka. Ndichafara kuva mutongi pachirongwa ichi. Ndokumbira undipe rumwe ruzivo ”- Barrington Taylor (Watershed Projects NEPA) "Ndinokutendai nekusvika. Inzwa wakasununguka kunditumira email ruzivo rwuri pamusoro uye chero rumwe ruzivo ”- Rochelle Forbes (Sandal South Coast PR Manager). Sekureva kwaSachigaro weBluefields Community Competition Steering Committee, "Izvi hazvigoneke pasina timu yedu yakazvipira yevazvipiri vanoshanda kuseri kwezviitiko. Ava vanosanganisira VaAndré James, Amai Alrica Whyte-Smith, Amai Tracey Edwards, Amai Diana McIntyre-Pike, Amai Tracey Spence, VaCharles O. Wilkinson avo vanoti Sir W One, Amai Alison Massa, Muzvare Adrianna Parchment naVaKelon Wedderburn. Tinotenda kune vatinotsigira, shamwari, uye mhuri dzenharaunda. Tinodawo kushandisa mukana uyu kukurudzira vamwe vanobva munzvimbo iyi, vangave vasipo, kuti vauye kuzokwira.
Iyo nguva yekubatana maoko uye kubatsira kusimudza mugwagwa wako wega ikozvino! Iyi ichave yako yakanaka Jamaican nzvimbo yekutarisira, pakudzoka kwako. Mipiro yese ichashandiswa kune mibairo uye kubatsira vatori vechikamu nekugadzirira, pazvinogoneka. Iyi purojekiti ichakurudzira vatori vechikamu kune zvimwe zviito zvakanaka, uye inogona zvakare kugamuchirwa zviri nyore kune dzimwe nzvimbo dzeJamaica uye ive inosimudzira shanduko munharaunda.